> Resource > iPad > Sida loo kaabta iPad Faylal ay si External Hard Drive
"My ku dhawaad ​​buuxa 64 GBS iPad (macruufka 9) waxaa ay kor u cunayo HD. Waxaan leeyahay sida 200 MBs ka tagay! Ma jiraa hab loo badbaadiyo gurmad ay u HD dibadda u badbaadin for mar kasta u baahanahay in aan soo celiyo?"
Ma doonaysaa in ay gurmad iPad files si drive adag dibadda waaba wax lama filaan ah ku dhici waa, iyagoo sababaya maqal la'aan xogta weyn? Waxaa la go'aamiyey in ay iska iibiso hore iPad, si aad u xiiseynayey in ay gurmad dhammaan faylasha on iPad ka hor inta heshiiska? Wax kasta oo sabab u yahay, inaad ku gaadhaan danihiina in ay tahay ma ahan wax sahlan in gurmad iPad in drive dibadda adag. Inkastoo Apple kuu ogolaanayaa inaad dhoofiyaan photos iyo video shot aad iPad mar kasta oo aad iPad ku xirmaan kombiyuutarka via cable USB ah. Si kastaba ha ahaatee, waa ka fog isagoo ku filan weli, sababtoo ah mararka qaar, waxa kale oo aad rabto in aad gurmad music, xiriirada, fariimaha oo dheeraad ah. Caawinaya sida Lugood yahay, gurmad iPad file noqon doonaa si toos ah Lugood ah, si aad weli nuqul karaa in drive dibadda adag.
Haddii tani ay tahay kiiska, waxaan heer sare aad ku talin sahlan in la isticmaalo iPad gurmad qalab - ka TunesGo Wondershare Retro (Windows). Waxay kuu ogolaanaysaa iPad music gurmad, playlists, filimada, sawiro, xiriirada, SMS, videos music, bandhigyada TV, audiobook, Lugood U Nayroobi si drive dibadda adag. Ka sokow, files ku taageeray yihiin si aad u sahal in ay akhriyaan oo ay isticmaalaan.
Dadka isticmaala Mac, fadlan u TunesGo Wondershare Retro (Mac) . Tani version Mac aad u saamaxaaya in ay sawiro gurmad, filimada, muusikada, videos music, podcasts, Lugood U, audiobook iyo TV muujinaysaa ka iPad in drive dibadda adag, macruufka 9 iPad taageeray.
Tallaabooyinka Easy in files gurmad iPad in drive dibadda adag
Dooro version saxda ah ee software iyo download it in aad PC ama Mac Windows. Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'sameeyaan gurmad iPad in ay drive dibadda adag la version Windows ah.
Tallaabada 1. Connect iPad iyo drive dibadda adag tahay in kombuutarka
Isticmaal fiilooyinka USB labada xirmaan oo ka mid ah iPad iyo drive adag dibadda si PC. Orod software this. Marka iPad la ogaado, waxaa ku tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa hoose ee software-ka. Iyo, drive dibadda adag ayaa la soo bandhigi doonaa on your computer sidoo kale.
Fiiro gaar ah: The versions Windows iyo Mac of taageerada software TunesGo Retro taageerto kor u files on iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad 2, iPad Air, iPad New iyo iPad macruufka orodka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 iyo macruufka macruufka cusub 9 ilaa drive dibadda adag.
Tallaabada 2. files ee kaabta iPad u drive dibadda adag
In uu furmo suuqa hoose, u tag dhoofinta Music si gal on line hoose. Markaas, caleenta your computer si aad u hesho gal ah oo ku saabsan baabuur dibadda adag. Markaas, taas software doonistii gurmad heesaha oo dhan on your iPad in drive dibadda adag.
Dib ugu iPad music, videos, sawiro, xiriirada iyo SMS si drive dibadda adag.
In galeeysid bidix, si gooni gooni ah guji Media , playlist , Photos , Xiriirada iyo SMS . Markaas, suuqa kala dhiganta u muuqataa in ay leeg- saxda ah.
By gujinaya Media , aad awoodo gurmad music, filimada, music videos, podcasts, bandhigyada TV, audiobook iyo Lugood U.
Riix playlist iyo playlists aad doonayso xulay. Riix dhoofinta in . (Waa la heli karaa in version Windows ah.)
Riix Photos > dooran photos> dhoofinta in dhammaan photos iPad in drive dibadda adag tahay in gurmad la doortay ama.
Riix Xiriirada > xiriir la xusho> dhoofinta in. (Waxaa la samayn karo version Windows).
Riix SMS> sax ah iMessages, farriimo MMS & text> dhoofinta in. (version Windows oo kaliya ayaa kuu ogolaanaysaa inaad taas loo sameeyo.)
Eeg, in ay hage u sahlan oo ku saabsan sida loo raad raac iPad (macruufka 9 taageeray) si drive dibadda adag. Iyada oo taageero ka software tan, waxaad kaloo sameyn kartaa files gurmad on iPad in ay Lugood ama qalabka kale ee macruufka aan ku xirid ah.
Download TunesGo Retro in ay isku dayaan inay taageerto kor u iPad in drive dibadda adag.
Daawo video ay u files ipad gurmad si drive dibadda adag